Homeसमाचारशाकाहारी भोजन खानुका यस्ता छन् फाइदा हेर्नुहोस्
November 22, 2020 admin समाचार 9338
दै’निक जीवनमा भोजन अत्या’श्यक छ । सन्तुलित भोजनले हाम्रो शरीरलाई त’न्दुरुस्त बनाउँछ । हरेक मानिस भोजनमा फरक–फरक परि’कार खाने गर्दछन् । भोजनका सवाल’मा मानिसहरु कोही मां’साहारी हुन्छन् भने कोही शा’काहारी ।
समाजमा मांसा’हारी बढी भेटिन्छन् तर मांसाहा’रीभन्दा शाकाहारी भोजनमा केही गुण’हरु बढी पाइने उनीहरुलाई पत्तो हुँदैन । तुला’नात्मक रुपमा मां’साहारी भन्दा शाकाहारी भोजन शरीरका लागी उपयोगी र स्वस्थ्य’वर्द्धक हुन्छ । शाका’हारी भोजनका फाइदा यस्ता छन् –
मांसा’हारी भन्दा शाकाहारी भोजन हलुका हुन्छ, जसलाई सहजै पचाउन सकिन्छ । मांसा’हारी भोजनभन्दा शाकाहारी भोजन सेवन गर्न कम ऊर्जा खपत हुन्छ । शाकाहारी भोजनले शरीरमा स्फु’र्ति पनि बढाउँछ । शाकाहारी भोजन गर्ने मानिसमा मान’सिक रोगको सम्भा’वना कम रहन्छ ।
यस प्रकारको भोजनले मानव मष्ति’कलाई ताजा र टाठो बनाउने गर्दछ शाकाहारी भोजनमा पनि मांसा’हारी झैँ सबै पोषण पाउन सकिन्छ ।मां’साहारी भन्दा शाकाहारी भोजनले पाचन प्रर्णालीलाई नै बलियो बनाउने गर्दछ । शाकाहारी भोजनले शरीरको प्रतिरक्षा’त्मक प्रणालीलाई बलियो बनाउँछ ।
यस प्रकारको भोजन गर्नेमा छिटो बिरामी हुने र गम्भीर रोग लाग्ने खतरा कम हुन्छ । मां’साहारी भोजनको तुलनामा शाकाहारी भोजनमा विषाक्त पदार्थ कम हुन्छ । शाकाहारी भोजनले शरीरमा भएको विषालु पदार्थलाई बाहिर निका’ल्न सहयोग गर्छ । रक्तचाप सन्तुलित राख्न शाकाहारी भोजन उत्त’म हुन्छ ।
मांसा’हारीको तुलनामा शाकाहारी भोजन गर्ने मानिसलाई मो’टोपन कम हुन्छ । शाकाहारी भोजनमा मुटुरोग, कोले’स्ट्रोल लगायतका रोग हुने सम्भा’वना न्यून हुन्छ । शाकाहारी भोजन गर्नेहरुमा हृदय’घातको सम्भावना कम हुन्छ ।-खबरहब बाट
June 11, 2021 admin समाचार 5061
आँचलले कसलाई हाल्ने भइन् मु’द्दा? प्रमाण सहित उ’जुरी दिन प्रहरी का’र्यालय पुगेपछि
June 6, 2021 admin समाचार 4382
पछिल्लो समय सबैभन्दा धेरै सा’माजिक सञ्जालको प्र’हार खेप्ने नायीका हुन् आँ’चल शर्मा । उन’ले डाक्टर उदिप श्रेष्ठसंग विवाह गरेपछि उनका बारेमा अनेक प्रशंग जोडेर समा’चार बनाइए । कला’कारको ब्यक्तिगत जिवन सर्वसा’धारण’का लागि रोचक लाग्छन् ।
March 10, 2021 admin समाचार 6066
सुतेर पनि इम्युनिटी पावर बढाउन सकिने यस्तो छ जन’स्वास्थ्य विज्ञ डा. पाण्डेको सुझाव (241915)